Prof. Geedi Oo Lafahiisa Xamar Kala Baxsaday Kadib Markii Uu Dhegihiisa Ku Maqlay Qarrax Naftiisa Ku Abuuray Naxdin Uu Filan Waayey
Prof. Geedi ayaa dharbaaxo lama filaana wuxuu kala kulmay socdaalkii uu dhowaan ku yimid magaalada Muqdisho. Warkii ugu dambeeyey oo laga maqlayna wuxuu ahaa mid ka turjumayey carar uu ku baqday.
Qarraxa loo geestey Prof. Geedi ayaa xambaarsanaa digniin culus oo fariinta la soo gaarsiinayey ay ahayd inaan la jecleysan hebednimada uu danaha Col. Cabdullahi ugu adeegayo. Waxaa sidoo kale fariinta ka mid ahaa in Col. C/llahi uu heshiis ama dagaal mid ku yimaado Xamar, uuna ka waantoobo adeegsiga shaqsiyaadka aysan quseyn is maandhaafka siyaasadeed. Waxa inta badan la is weydiiyaa waxa Col. C/llahi uu had iyo jeer derbi ahaan u adeegsanayo Maxamed Dheere iyo Prof. Geedi.
Hadda ka hor ayey ahayd markii Shariif Xasan uu ku gacan seyray inuu dhexdhexaadin la galo Prof. Geedi, isagoo tilmaamay ineysan jirin khilaaf isaga iyo Prof. Geedi u dhexeeya. Waxaa hadda la isweydiinaya waxa ay macnaheedu tahay in inta Col. C/llahi uu ku dhawaaqay xiritaanka garoonada Xamar, haddana uu soo diro Geedi oo doonaya in gurigiisa boqasho sharaf loogu tago.
Inkasto ay ahayd wax laga xumaado qarraxaas loo geystey Geedi, haddana isagaa sabab u ahaa inuu heerkaas gaarsiiyo sharafdhaciisa. Waxey ahayd inuu isweydiiyo waxa uu u noqday shaqsi aan laga jecleyn siyaasada Soomaalida oo markasta loola raadsado qarrax. Ma wuxuu arki waayey in dagaal hubeysan uu u dhexeeyo hogaamiyeyaasha Xamar iyo Col. C/llahi, isaguna uusan ahyn dagaalooge hubeysan, sidaasna aysan ku habooneyn inuu ka afnaqo dagaal aan isaga quseyn.
Prof. Geedi wuxuu ceeb weyn kala kulmay wafdigii uu soo kaxeystay iyo bulshada caalamka. Wuxuu hilmaamy in hadda Xamar cid walba ay xoogeeda ku joogto oo aysan jirin wax isaga gooni ahaan dabada looga soo riixo. Wuxuu hilmaamay in isaga loo soo dhiibey bam, nasiib wanaagse ay isaga ku qaraxday intii aysan qarxin tii loo soo dhiibey oo ahayd in Xamar laga qarxiyo iska horimaad hubeysan oo madaxa la isgu garaaco beelaha walaalahaa ee wada deggan Xamar.
Gefefka aan xisaabsaneyn ee Prof. Geedi uu ku kacayo waa mid uusan hadda ka garqaadan karin waayo durbaan xoogan ayaa dhegehiisa ku dhacaya oo maqalkiisa tiray. Guuldarrada uu Prof. Geedi kala soo kulmay Muqdisho waxey astaan u tahay inuusan waxba ka fahmin dhaqanka hoogaamiye kooxeedyada hubeysan, uuna seegay talooyin waxtar leh oo dadaalkiisa lagu tixgelin lahaa.
Prof. Geedi ayaa si sharafxumo leh uga soo baxsaday Muqdisho, waxaa loo qabsaday diyadii dadkii ay ilaaladiisu ku laayeen socdaalkiisa, sidoo kale waxaa la warsaday magdhow ilaaladii la socotey ee ku dhimatay qarraxyadii loo geystey, waxaa sidoo kale ku soo furmay murano lacageed iyo kuwo deymo ah. Dareenka keliya oo laga maqlayey waxey ahayd hadalo xambaarsan aflagaado, dhiilo coladeed, handadaad iyo carro qiiro badan wadatey oo ay ka muuqato tabar darro siyaasadeed. Intaas oo dhan waxey muujinayaan inuu Geedi u muuqdo inuu yahay howlwadeen qaldan oo ay ku adag tahay xilka uu huwan yahay. Xilkii nabada loogu dhiibey maba gudana gormay qaaday qiirada coladeed!